Somalia oo ka qeyb galeysa Shir Maanta ka furmaya Magaalada Sharma Sheekh – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Wasiirka Caddaaladda ee Somalia, Avvocate Xasan Xuseen Xaaji iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay ka degay Garoonka Caalamiga ee Diyaaradaha ee Caasimadda dalka Masar ee Qaahira, si ay uga qeyb galaan Shirkii ugu horreeyey ee La-dagaalanka Musuqa ee Qaaradda Afrika oo Maanta ka furmi doona magaalladda loo dalxiis tago ee Sharma-sheekh ee dalkaasi.
Kulankaasi oo socon doona muddo 2 maalmood waxa ka qeyb geeli doona Wasiiradda Caddaalladda, Arrimaha Gudaha, Hanti-dhowrayaasha, Madaxda Hay’adaha La-dagaalanka Musuq iyo Xisaabiyayaasha oo ka kala socda in ka badan 51 Dowladood .
Wargeyska Alahram ee ku hadla Codka Dowladda Masar ayaa qoray inay in ka badan 200 oo qof lagu casuumay Shirkaasi oo ah kii ugu horreeyey ee ay dalalka Afrika uga wada tashadaan xal-u-helista Musuqa iyo ku-takri-falidda Hantida Ummadda.
Shirkaasi waxaa goobjoog ahaan uga qeyb geli doono Wafuud ka kala socota dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Madaxweynaha dalka Masar, C/fataax Alsiisii ayaana furi doona Shirkaasi, oo uu shir-guddoomin doono Wasiirka Caddaaladda ee Masar, Xasaam C/raxmaan.
Sidoo kale, Wasiirka Caddaaladda Somalia, Avvocate Xasan Xuseen Xaaji ayaa ah qofka 8-aad ee ka hadli doona Shirkaasi, iyadoo Wasiir kasta oo ka socda 51-dal ee ka qeyb galayo Shirkaasi lay jeedin doonaan Warbixin xilligeeda lagu sar-gooyey muddo 7 daqiiqo.
Hindisaha Qabsoomida Shirkaasi waxaa horey u casuumaadeeda u fidiyey Madaxweynaha dalka Masar, ahna Guddoomiyaha sannadkan ee Ururka Midowga Afrika, Al-sayid C/fataax Alsisi, xilli uu marti-gelinayey Madashii 3-aad ee Shirkii Malagashiga ee Qaaradda Afrika Madaxda Dowladaha Afrika oo sannadkii 2018-kii lagu qabtay magaalladda Sharma Sheekh.
Dhinaca kale, Qaaradda Afrika ayaa la sheegay inay sannad kasta khasaaraan 5 Billion oo Dollar sannadkiiba, sida lagu sheegay Warbixin ay horey u soo saartay Hay’adda Caalamiga ee Daah-furnaanta ee Transparency International oo fadhigeeda dhexe ku yaallo caasimadda dalka Jarmalka ee Berlin.
DEGDEG: Dad ku dhaawacmay duqeyn ay Xuutiyiinta la beegsadeen Garoon ku yaalla Sacuudiga